UMary Sharpe, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba-iSiseko soMvuzo
Ikhaya UMary Sharpe, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba
UMary Sharpe wazalelwa eGlasgow waza wakhula kwintsapho ezinikezele kwinkonzo karhulumente ngokufundisa, umthetho kunye neyeza. Ukususela esemncinci, wayenomdla ngamandla wengqondo kwaye uye wafunda ngako oko.
Imfundo kunye namava oLwazi
UMary wagqiba isidanga se-Master of Arts kwiDyunivesithi yaseGlasgow ngesiFrentshi naseJamani ngengqondo kunye nefilosofi yokuziphatha. Ulandele le nto ngesidanga se-Bachelors kwezomthetho. Emva kokuthweswa isidanga usebenze njengegqwetha kunye noMmeli kule minyaka ili-13 izayo eScotland nakwiminyaka emi-5 kwiKhomishini yaseYurophu eBrussels. Emva koko wenza umsebenzi wokuthweswa isidanga kwiYunivesithi yaseCambridge kwaye waba ngumhlohli apho iminyaka eli-10. Ngo-2012 uMary wabuyela kwiFakhalthi yaBameli, iScotland Bar, ukuya kuhlaziya ubugcisa bakhe benkundla. Ngo-2014 waya engaziqheliseli ukuseka iSiseko soMvuzo. Uhlala elilungu leKholeji yezoBulungisa kunye neFakhalthi yaBameli.
UMary uneendima ezininzi zobunkokeli kwiThe Reward Foundation. NgoJuni 2014 wayenguSihlalo wokuseka. Ngomhla ka-Meyi ka-2016 wangena kwindima yobungcali yeGosa eliyiNtloko lesiGqeba awathi walibamba kwada kwaba nguNovemba 2019 xa waphinda wajoyina iBhodi njengoSihlalo. Kutshanje, ngo-Matshi 2021 waphinda wangena kwindima yeGosa eliyiNtloko lesiGqeba.
UMary waya kwiDyunivesithi yaseCambridge ngo-2000-1 ukuya kwenza umsebenzi wokuthweswa isidanga kuthando lwezesondo kunye nobudlelwane bamandla esini ngexesha le-Antiqueity yakudala ukuya kwiXesha eliQhelekileyo. Iinkqubo zexabiso eziphikisanayo ezibonakalayo ngelo xesha libalulekileyo zisenempembelelo kwihlabathi namhlanje ngakumbi ngenkolo nenkcubeko.
UMary wahlala eCambridge kule minyaka ilishumi ilandelayo.
Ukuxhasa uPhulo loPhulo
Ukongeza emsebenzini wakhe wophando, uMary uqeqeshwe njengomququzeleli weworkshop kwiYunivesithi kunye nemibutho emibini yamazwe aphumeleleyo, esebenzisa amabhaso asebenzisa uphando kwizengqondo nakwinzululwazi ngendlela esetyenziswayo. Ingqwalasela yayijolise ekuphuhliseni ukomelela koxinzelelo, ukunxibelelana nabanye kunye neenkokheli ezifanelekileyo. Uye wasebenza njengomcebisi kubafundi bamashishini kunye nombhali wezenzululwazi Cambridge-MIT Institute. Oku kuhlanganisana phakathi kweMassachusetts Institute of Technology (MIT) kunye neYunivesithi yaseCambridge.
Ukubambisana kwakhe kwiYunivesithi yaseCambridge kuhlala kuzo zombini Ikholeji yaseSt Edmund kwaye Lucy Cavendish College apho elilungu eliDibeneyo.
UMary uchithe unyaka njengoMfundi oNdwendweleyo kwiKholeji yaseSt Edmund, kwiDyunivesithi yaseCambridge kwi2015-16. Oku kwamvumela ukuba agcine imeko yophando kwisayensi evelayo yokuziphatha gwenxa. Ngelo xesha wathetha kwiinkomfa zelizwe kunye nezamazwe aphesheya. UMary wapapasha inqaku elimalunga "neQhinga lokuThintela iziyobisi ezingamanyala kwi-Intanethi Apha (iphepha 105-116). Kwakhona wabhala ngokubhaliweyo isahluko Ukusebenza nabaphuli-mthetho ngokwesondo-isiKhokelo saBasebenzi papashwe nguRoutledge.
Ukusukela ngeyoMqungu yowama-2020 kude kube kukuvalwa kobhubhane kuqala, uMary wayeseLucy Cavendish College njengoMfundi otyeleleyo. Ngelo xesha wapapasha iphepha kunye noGqirha Darryl Mead apho uphando lwexesha elizayo olunengxaki yokusebenzisa iphonografi kufuneka ihambile.
UMariya uqhubeka nomsebenzi wokunyanzelisa ukuziphatha njengelungu le UMbutho weZizwe ngezizwe weSifundo soButyebi bokuziphatha. Unike iphepha kwinkomfa yabo yesi-6 yamazwe aphesheya e-Yokohama, eJapan ngoJuni 2019. Uyapapasha uphando kule ndawo ekhulayo kwiintetho ezihlaziyiweyo. Iphepha elikufutshane linokufumaneka Apha.
IzobuGcisa boLonwabo noCwangcisoTED)
Umxholo we-TED usekwe "kwiingcinga ezifanelekileyo zokwabelana". Liqonga lemfundo kunye nokuzonwabisa elifumanekayo njengeentetho ezibukhoma nakwi-intanethi. UMary waya kwi-TED Global e-Edinburgh ngo-2011. Kungekudala emva koko wacelwa ukuba aququzelele eyokuqala TEDx Umnyhadala waseGlasgow ngo-2012. Esinye sezithethi ebezizimase lo mboniso nguGary Wilson owabelane ngeziphumo zakutsha nje kwezaziwayo website yourbrainonporn.com malunga nefuthe le-intanethi ye-intanethi kwingqondo kwintetho ebizwa "Olona Lwazi lubalulekileyo lwe-porn". Ukususela ngoko loo ntetho ijonge ngaphezulu kwamaxesha e-13.6 ezigidi kwaye iguqulelwe kwiilwimi ze18.
UGary Wilson wandisa intetho yakhe ethandwayo kwiincwadi ezilungileyo kakhulu, ngoku kwisekondari yayo yesibili, ebizwa ngokuba Ubuchopho Bakho kwi-Porn: Iimifanekiso zoononopasho ze-Intanethi kunye neSayensi eVukayo yoLungiso. Ngenxa yomsebenzi wakhe, amawaka abantu Bathethile kwiiwebhusayithi zokubuyisela iphonografi ukuba ulwazi lukaGary lubakhuthaze ukuba bazame ukuyeka iphonografi. Baye baxela ukuba impilo yabo yezesondo kunye neengxaki zeemvakalelo zaqala ukunciphisa okanye zanyamalala okoko wayeka ukubukela iphonografi. Ukunceda ekusasazeni igama malunga nolu phuculo lubalulekileyo nolubalulekileyo kwezentlalo, uMary waseka iSiseko soMvuzo kunye noGqirha Darryl Mead nge-23 kaJuni 2014.
Ukusetyenziswa kwe-porn ngumcimbi ozikhethele abantu abadala. Asizimiselanga kuyinqanda kodwa sikholelwa ukuba ngumngcipheko omkhulu nakwabo bangaphezulu kweminyaka ye-18. Sifuna ukunceda abantu ukuba benze ukhetho 'olunolwazi' malunga nalo ngokusekwe kubungqina bophando olukhoyo ngoku. Sikholelwa ekubeni ibhetele impilo kunye nokuba sempilweni ukuchitha ixesha sikhulisa izakhono zentlalo eziyimfuneko ekwenzeni ubudlelwane obusondeleyo busebenze ixesha elide.
I-Reward Foundation iphulo lokunciphisa ukufikelela kwabantwana ngokulula kwi-intanethi kuba uninzi lwazo uphando amaphepha abonisa ukuba kuyabenzakalisa abantwana kwinqanaba labo elisemngciphekweni ukukhula kwengqondo. Abantwana kwi umboniso we-autistic kwaye neemfuno zemfundo ezizodwa zezona zisemngciphekweni wokwenzakala. Kubekho ukunyuka okumangalisayo ukuxhaphazwa ngokwesondo ngomntwana kwiminyaka eyi-7 eyadlulayo, kwingozi yokuxhatshazwa ngokwesondo ngokuxhomekeke kubasebenzi bezempilo abaye baye kwiindibano zocweyo kwaye mhlawumbi ukufa. Siyawaxhasa amanyathelo kaRhulumente wase-UK ajikeleze ukuqinisekiswa kweminyaka kubasebenzisi njengoko kungowokuqala kwaye ophambili kwinqanaba lokhuselo lomntwana. Njengokuba uMthetho woQoqosho lweDijithali iCandelo III ubekelwe bucala, sinethemba lokuba urhulumente uza kuwukhawulezisa umsebenzi kwi-Online Harms Bill. Le ayiyombumbulu yesilivere, kodwa yindawo elungileyo yokuqala. Ayizukuthatha indawo yemfundo malunga nobungozi.
Awards kunye nokuzibandakanya
Usihlalo wethu ufumene inani lamabhaso ukusukela kwi2014 yokuphuhlisa umsebenzi weSiseko. Iqale ngonyaka woqeqesho kusetyenziswa imbasa ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi yaseScotland. Ithunyelwe I linabantu e-Edinburgh. Kwalandelwa ngamabhaso okuqala amabini avela kwi-UnLtd, ezimbini zivela kwi-Educational Trust kunye nenye evela kwiNgxowa-mali enkulu yeLottery. UMary usebenzise imali kwezi amabhaso ukuphayona kwiidetox zedi zedijithali ezikolweni. Uye wenza nezicwangciso zezifundo malunga nephonografi abanokuzisebenzisa ootitshala ezikolweni. Kwi-2017 uncede ngokuphuhlisa indibano yosuku olunye eyamkelwe yiRoyal College of General Practitioners. Iqeqesha abaqeqeshiweyo malunga nefuthe le-intanethi kwi-intanethi kwimpilo yengqondo nasemzimbeni.
UMary wayekwibhodi yabaLawuli yoMbutho yokuPhucula iMpilo yezeSondo e-USA ukusuka kwi-2016-19 kwaye uvelise iindibano zocweyo eziqinisekisiweyo zoochwephesha bezesondo kunye nootitshala bezesondo malunga nokusetyenziswa gwenxa kwe-intanethi ngabantu abakwishumi elivisayo. Uye wancedisa kwiphepha leNational Organisation for the Treatment of Abusers on "Prevention of Harmital Behaviour" kwaye wahambisa neeworkshops ezi-3 kwiingcali malunga nefuthe le-intanethi yamanyala kwindlela yokuziphatha ngokwesondo.
Ukusuka kwi-2017-19 uMary wayedibana neZiko loLutsha kunye nezoBulungisa kuLwaphulo-mthetho kwiYunivesithi yaseStrathclyde. Igalelo lakhe lokuqala lalithetha kumsitho weCYCJ nge-7 Matshi 2018 eGlasgow. Amaseli amhlophe kunye namaseli entolongweni: Ukudibanisa iimfuno ezingenakuphuhliswa kwengqondo kunye neengcinga zabantu abatsha abasengozini.
Kwi-2018 watyunjwa njengomnye we WISE100 iinkokheli zentombi kwiinkampani zentlalo.
Xa engasebenzi, uMary uyakuthanda ukubaleka, iyoga, ukudanisa kunye nokwabelana ngezimvo ezintsha kunye nabahlobo.
Xhumana noMariya nge-imeyile mary@rewardfoundation.org.